Melanoma Ukwelashwa Kwa-Israyeli
Melanoma uhlobo esiyingozi kakhulu lomdlavuza wesikhumba. Leli Uhlobo kusukela sombala amaseli kwesikhumba futhi ingaqala kuphi esikhumbeni. Labantu besilisa yesimila ngokuvamile utholakala esiqwini (esifubeni nasemhlane), engxenyeni zesifazane - e wemikhawulo aphansi.
Isimila inchubekelembili kusuka melanocyte amaseli ukukhiqiza melanin futhi zikhona esikhumbeni, amehlo, amagobolondo, mucosa ngomlomo, nail eziyize. Ngaphansi kwethonya ezinye zezici melanocytes ungakwazi ngokushesha Kuhlukanisa kuphinde ukukhiqiza ukudaya melanin ensundu, ukuze zomdlavuza ngokuvamile nsundu ngombala.
Umbala ezifanayo futhi abe izindawo esikhunjeni emzimbeni, Papillomavirus eziningi, birthmarks, futhi equkethe yinhlanganisela melanocytes. Lezi ukwakheka kanye unekhono sikhiqize ku-melanoma at traumatization njalo, ecwaninga, yokucucuza solar ukubasusa at ukuthambekela abahlukene ngu Ligation, cauterization, njll
Noma yimuphi umuntu ekhona emzimbeni 5 kuya ku-20 izilonda esikhunjeni (amavukuzi) futhi 7 100 000 unyaka ngamunye emhlabeni is mutating lezi zokwakheka e-melanoma. Kodwa-melanoma imfundo obunsundu ingase futhi ukuhlanza isikhumba.
Serious uphawu melanoma isikhumba Ukuntula izinwele lesikhumba izindawo. Soguquko lwegciwane singalawuleka e-melanoma izindawo luyokhula ngokushesha futhi ushintshe umbala umthunzi ngokubomvu Pinkish, greyish noma amhlophe. Izimpawu ze-esiteji eziseqophelweni ukuqhubekela phambili kwesifo kuthiwa carding, ukopha lwesitho sangasese sowesifazane, ubuhlungu, lokuzalwa nemfundo iseduze ne maphakathi elalisanda kumiswa sombala amabala.
Melanoma metastasizing nezinye izinhlaka imithambo - amathambo, ubuchopho, amaphaphu - nolaka sokuthuthuka lihlukile.
Endabeni ka isifo kusolwa ekwelapheni melanoma Israyeli iqala luhlolo lomdlavuza (ubukhulu, uhlamvu, umbala, khona ulceration) kanye nazo zonke ezinye isikhumba, izindlala zamanzi palpable, inhlolovo isiguli olwenziwe nezinsuku bangabonwa futhi izimpawu izindawo osolisayo.
Ukuze sithole ngqo uphethwe isicelo isikhumba biopsy - ukuthatha isampula epithelium ngaphansi izinzwa endawo ubuso bayo izingqimba, kulandele cwaningo ngesibonakhulu, ukuhlolwa mzimba ngokuba khona amangqamuzana omdlavuza.
Ukucinga isimila metastases emzimbeni asetshenziswa esifubeni-X-ray, CT, i-MRI kanye PET Luhlolo ithambo imfuyo njalo yokuchayeka emisebeni ye amathambo.
Uma usesho-melanoma bendawo ngokuvamile Kunconywa nokuqedwa imfundo eziko, nasezindaweni eziseduze ngokusobala enempilo kwesikhumba futhi metastases Kutholwe vsluchae uma uvumela kwasendaweni yabo. Esinesibalo abalulekile udokotela isikhumba ukususwa kungenzeka ukwenza nolwelwesi isikhumba. umdlavuza Aggressive kwadlanga ukusabalala izilonda metastatic ne uketshezi igazi kubangele ukwelashwa ngokuhlanganyela melanoma kwa-Israyeli.
Healing of ukuphathwa amakhemikhali Kwenziwa ngesikhathi izigaba ngasekupheleni lomdlavuza lakhula limfauzly. Himpreparatov injected nge isipetu ku esitho, zithinteka isimila esinomdlavuza okwasendaweni imiphumela yabo engxenyeni ethintekile kwesikhumba.
Endabeni melanoma metastatic ebuchosheni, nohlaka lwamathambo kanye nezinye izitho usebenzisa radiotherapy. Ukubhubhisa umzimba anomdlavuza-X ray, kunciphisa ubukhulu melanoma.
Endabeni ukusabalala metastatic usebenzisa entsha ekwelapheni melanoma e-Israel - yokwelapha yemvelo. Luhilela ukusetshenziswa imithi efana ncamashí imikhiqizo yemvelo (amaprotheni, cytokines) akhiqizwa ingaphakathi umzimba ukulwa nezifo. ukukhiqizwa ezinganele zazo siqu "Kwase kuqhamuka ababulali melanoma" ezakha ukukhiqizwa ezengeziwe amaprotheni ngaphandle kwesibeletho kanye ukufakwa kwabo izivikeli mzimba.
Ukuhlonza kanye aphathe melanoma kwa-Israyeli-National Institute Melanoma Yakhiwa - emitholampilo ucwaningo izikhungo esikhulu kunazo zonke emhlabeni osathuthuka ezintsha umdlavuza zokwelapha, kuhlanganise umkhiqizo esiyingqayizivele Ipilimumab - ukukhiqizwa esiqine ivuselela ka-T-amaseli obhekene anti-umdlavuza amasosha omzimba.
Umchamo ukuhlaziywa: izinhlobo nezindlela zokuqoqa
I opesen kolwelwesi antral?
Indlela ukwandisa-hemoglobin egazini
Izibuyekezo Supradin, izincomo lokusebenza
Ukuhlinzwa - Yini leyo? Izinhlobo futhi izigaba izinqubo kuhlinzwa
Ukuhambisa iluphu hook: izimiso eziyisisekelo ukunitha nokusetshenziswa izimo
Ukwenza i-credit card online
Kuyini inethiwekhi Teaser, futhi abakwenzayo nalo?
Ithanga gymnosperms: ukubuyekezwa, izici, ukunakekelwa kanye ukutshalwa
Wesigxavuni - kungcono nje
Izinhlobo zokuphepha. Izinhlobo lemifishane nokuphepha
EBulgaria, Shipka - mlando mlando AseBalkan
Kuyini izimo zomnotho